Search Results for December 2021
မြန်မာ တို့ ညီညွတ်ကြမှသာ လက်ရှိ အနေအထားကို အဆုံးသတ်နိုင်
by Hla Soewai - 31 Dec 2021 09:55 AM
အဆိုပါ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဒက္ကားမြို့ ထုတ် ဒေလီစတား သတင်းစာမှ ဆောင်းပါးရှင် Tasneem Tayeb ၏ “Can Myanmar Unite to Stop the Tatmadaw? အား စထရိတ်တိုင်း သတင်းစာမှ တဆင့် ပြန်လည် ဖေါ်ပြ ခဲ့သည်ကို ကောက်နှုတ်တင်ပြသည်။ မြန်မာပြည်သူများ အားလုံး ညီညွတ်စွာ ...
by Hla Soewai - 31 Dec 2021 09:51 AM
သူ့စကားကြောင့် ဘုသီ၏ မျက်နှာတွင် သွေးမရှိတော့သလို ဖြူဖပ်ဖြူရော် ဖြစ်သွားသည်။ ဘောင်းဘီ အိတ်ထဲ ထည့်ထားသော လက်များက လက်သီးဆုပ် သဏ္ဌာန် ဖြစ်လာသည်ကို ဗီကာရီ သတိထားမိ လိုက်သည်။ သူ ပြောလိုက်သည့် စကားက ဂရေ့စ် ကလာရင်ဒန် အတွက် အထူး အန္တရာယ်များလှသည်။ ဘုသီသည် မှတ်တမ...
by Hla Soewai - 30 Dec 2021 09:30 AM
နောက်ဆုံးတွင် အခန်းတံခါးဝ မှ မီး စိမ်းလာခဲ့သည်။ ဗီကာရီလည်း ဘုသီ၏ ခန့်ညားလှသော တံခါးရွက် နှစ်ရွက် ကို တွန်းဖွင့်ကာ ဝင်လာခဲ့လိုက်သည်။ သူဖက်က ပြတ်ပြတ်သားသား မသိရမချင်း ပြန်ထွက်မလာဟု လည်း စိတ်ထဲက ကြုံးဝါးလိုက်ပြန်သည်။ စားပွဲနောက် တွင် ထိုင်နေသော ဘုသီက ...
D-Day နောက်ကွယ်ကသူလျှိုမဟုတ်သောသူလျှိုများ (၈၈)
by Hla Soewai - 29 Dec 2021 05:41 AM
“ဦးလေးကြီး ပြောတာတွေ ကျမ ဘာကြောင့် မယုံနိုင် ဖြစ်နေရသလဲ မသိဘူးနော်” “ အမှန်တွေ ပြောနေတာမို့ ယုံလိုက်စမ်းပါ ဂျင်နီ” “အဖေက ပြောတယ်၊ ဦးလေးကြီးက ရာဇဝတ်သား ဖြစ်ရမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် အကြမ်းဖက်သမား ပဲတဲ့၊ ရှောင်က အရင်တုန်းက ...
D-Day နောက်ကွယ်ကသူလျှိုမဟုတ်သောသူလျှိုများ (၈၇)
by Hla Soewai - 28 Dec 2021 05:25 AM
ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံး ပူနွေးပြီး နဖူးတွင် ချွေးများစို့လာရန် နျူမန် အဖို့ အချိန်အတော်ကြာ ယူခဲ့ရသည်။ ပြေးရသည့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု သည် ငယ်စဉ် ကလေးဘဝကစ၍ သူ့အတွက် မျက်လှည့်ပြခံရသည့် အလား ထူးခြားသော ခံစားမှုမျိုး အမြဲလို ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရစမြဲ ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ် တ...
SAVE THE CHILDREN လုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်း၊ ကုလ ထိတ်လန့်လာပြန်
by Hla Soewai - 28 Dec 2021 05:23 AM
ကယားပြည်နယ် ဖရူဆိုမြို့နယ် မိုဆိုကျေးရွာအနီးတွင် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီး အမျိုး သမီးများ၊ ကလေးသူငယ်များအပါအဝင် အရပ်သား ၃၅ ဦးကိုလူမဆန်စွာမီးရှို့ သတ်ဖြတ်သွားသည့် သတင်းက နိုင်ငံတကာ သတင်း စာမျက်နှာများ တွင် အကျယ်တဝင့် ပါလာပြီး နောက် SAVE THE...
D-Day နောက်ကွယ်က သူလျှိုမဟုတ်သော သူလျှိုများ (၈၆)
by Hla Soewai - 27 Dec 2021 05:23 AM
BERLIN: JANUARY 1944 ကပ် ဗိုဂဲလ် သည် သူ၏ ရုံးခန်း အတွင်း အိပ်ဖို့လုပ်ထားသည့် အိပ်စင်ပေါ်တွင် အိပ်မောကျနေစဉ် တခုခုကို ခြစ်ကုတ်နေသံမျိုး ကြားလိုက်ရ၍ ဆတ်ကနဲ ဆို နိုးထလာသည်။ ပါးစပ်ကလည်း “ဘယ်သူလဲဟေ့” ဟု လှမ်းအော်လိုက်သည်။ “ကျွန်...
D-Day နောက်ကွယ်ကသူလျှိုမဟုတ်သောသူလျှိုများ (၈၅)
by Hla Soewai - 26 Dec 2021 05:40 AM
“မလွှတ်ချင်ပေမယ့်လည်း မင်းက ဂျာမဏီအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင် အရေးပါနေတော့ စစ်ကြီး အတွင်း ဘာလင်မှာ ထားလို့ကို မဖြစ်ဘူး၊ မင်းအနေနဲ့ ရန်သူ ခံစစ်စည်းရဲ့ နောက်ကြောကို ထိုးဖေါက်နိုင်ဖို့ အင်္ဂလန်ကို သွားမှကို ဖြစ်တော့မယ်” ပြောရင်း ဗိုဂဲလ် က...
D - Day နောက်ကွယ်က သူလျှိုမဟုတ်သော သူလျှိုများ (အပိုင်း ၁ မှ ၈၂ အထိ)
by Hla Soewai - 24 Dec 2021 10:52 PM
(၁) https://www.facebook.com/873065203055414/posts/1488570611504867/ ... (၂) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1489260301435898&id=873065203055414 ... (၃) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1489982894696972&...
by Hla Soewai - 24 Dec 2021 10:47 PM
ကက်သရင်း သည် သူ့အမေးကို ချက်ချင်း ပြန်မဖြေသေးဘဲ မီးလင်းဖို မှ မီးတောက်များကို စိုက်ကြည့်နေသည်။ “ကျမ အိမ်ထောင် ပြုခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ကျမ အမျိုးသား နာမည်က မိုက်ကယ်ပါ၊ ဗြိတိန် ကို ထိုးစစ် စဆင်လာတဲ့ တိုက်ပွဲကြီး အစ မှာပဲ ရေလက်ကြား ပေါ်မှာ သူ့လေယာဉ် ပစ်ချခံလို...
by Hla Soewai - 24 Dec 2021 10:45 PM
ရေခဲသေတ္တာ ဖွင့်လိုက်မှ ကြက်ဥမွှေကြော် ကို ဘယ်လို လုပ်ရမှန်း မသိသည့် အဖြစ်ကို သတိရ လိုက်မိသည်။ မာရီယာကတော့ အရသာ ရှိအောင် လုပ်တတ်၍ သူလုပ်သည့် အတိုင်း လိုက်လုပ်ဖို့သာ ရှိတော့သည်။ ရေခဲ သေတ္တာထဲမှ ကြက်ဥသုံးလုံး၊ ထောပတ်အနည်းငယ် နှင့် ဒိန်ခဲခြောက် တဖဲ့ကို ထုတ်ယ...
အမည်ပေး ကင်ပွန်း တပ်ပွဲကြီး
by Hla Soewai - 24 Dec 2021 10:34 PM
ယမန်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကြည့်မြင်တိုင် ဖြစ်စဉ် ကြီးသည် တနိုင်ငံလုံး ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်သွားခဲ့ကြရသလို ကမ္ဘာသတင်းစာကြီးများ တွင်လည်း ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ ကုလ နှင့် အမေရိကန်တို့ မှ ထိပ်ဆုံးမှ ရှုတ်ချလာခဲ့ကြသည်။ မိမိတို့အား အုပ်ချုပ်...
Visitor Counter : 685427